Somaliland Archives - Page 4 of 6 - Puntland Mirror Believable Media Website
Wasiirka Warfaafinta Puntland oo Somaliland ku eedeeyay in ay ka dambeyso dhibbaatooyinka Al-Shabaab ee buuraha Galgala
January 16, 2018 Puntland Mirror 0
Boosaaso-(Puntland Mirror) Wasiirka Warfaafinta Puntland Cabdi Xirsi Cali ayaa ku eedeeyay maamulka Somaliland in ay taageeraan maleeshiyada Al-Shabaab, waxa uu ka sheegay shir saxaafadeed uu ku qabtay magaalada Boosaaso maanta oo Talaado ah. “Waxaan ogahay […]
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Somaliland ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto weerarka gardarada ah ay ku soo qaatay dhulka Puntland
January 10, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland ayaa wacad ku maray in Somailand ay cawaaqib xumo kala kulmi doonto weerarkeeda gardarada ah ee ay kusoo qaaday dhulka Puntland. Isaga oo ka hadlayay shir saxaafadeed xalay oo Arbaco ahayd […]
January 9, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror)Puntland ayaa joojisay baabuurta rakaabka ee ka dhex shaqeeya Puntland iyo Somailand, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka Nugaal xalay. “Laga bilaabo caawa oo taariikhdu tahay 8,1, 2018, saacadu markii la gaaro lixda saac waxaa […]
January 8, 2018 Puntland Mirror 0
Garoowe-(Puntland Mirror) Dowladda Puntland ayaa maanta oo Isniin ah ku eedaysay Somaliland in ay dagaal ku soo qaatay Puntland si ay u carqaladeeyaan safarka Madaxweynaha Soomaaliya ee Puntland. “Abaarihii shanta aroornimo ay duulaan qar iska […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Somaliland ayaa ka qarxay tuulada Tukaraq, sida ay sheegeen dadka deegaanka iyo ilo-wareedyo ammaanka ah. Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo katirsan Somaliland ay weerar ku […]
Garoowe-(Puntland Mirror) Ciidamo katirsan maamulka Somaliland ayaa subaxnimadii hore maanta oo Isniin ah la wareegay tuulada Tukaraq, oo kutaala wadada u dhaxeysa Garoowe iyo Laascaanood. Dagaal kooban ayaa halkaas ka dhacay kadib markii ciidamada maamulka […]
Somaliland oo dib u dhigtay dhismaha saldhiga millatari ee Imaaraatka Carabta ee Berbera
December 26, 2017 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Somaliland ayaa dib u dhigtay dhismaha saldhiga millatariga ee Imaaraatka Carabta ee Berbera, sida maanta oo Talaado ah uu daabacay wargesyka Geeska Afrika ee kasoo baxa magaalada Hargeysa, oo soo xiganaya ilo-wareedyo. Wasiirka […]
Jabhadda Xuutiyiinta oo maamulka Somaliland uga digay saldhiga milatari ee Imaaraatka Carabta ka dhisanayo magaalada Berbera
December 25, 2017 Puntland Mirror 0
Sanca-(Puntland Mirror) Jabhadda Xuutiyiinta dalka Yeman ayaa maamulka Somaliland uga digay qorshaha uu Isutaga Imaaraatka Carabta uu magaalada Berbera uga dhisanayo saldhiga milatari. Muuqaal baraha bulshada lasoo dhigay, ayaa Xuutiyiintu ku sheegeen haddii Somaliland aysan […]
November 23, 2017 Puntland Mirror 0
Dubai-(Puntland Mirror) Shirkada Divers Marine Contracting LLC ayaa bilowday dhismaha saldhiga milatariga Isutaga Imaaraatka Carabta ee Somaliland. Shirkada oo fadhigeedu yahay magaalada Shaariqa ayaa bilowday shaqada mashruuca kadib markii la siiyay qandaraaska mashruuca oo dhan […]
November 21, 2017 Puntland Mirror 0
Hargeysa-(Puntland Mirror) Muuse Biixi Cabdi oo ka tirsan xisbiga talada haya ee Kulmiye ayaa lagu dhawaaqay in uu ku guuleystay doorashadii madaxweynenimada Somaliland. Muuse ayaa helay 55.19% codadka, halka ninkii ugu dhawaa ee la loolamayay […]
Puntland announces Eid Al-fitr will start tomorrow
Garowe-(Puntland Mirror) Puntland announced that tomorrow will be the first day of Eid Al-fir, Minister of Justice and Religious Affairs Salah Habib Jama told media in Garowe this evening. Meanwhile, Puntland President Abdiweli Mohamed Ali [...]
Madaxweynaha Soomaaliya oo waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee Belgium u fadhiya Soomaaliya
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Shiikh Maxamuud ayaa maanta oo Isniin ah waraaqaha aqoonsiga ka guddoomay safiirka cusub ee boqortooyada Belgium u qaabilsan Soomaaliya Roxane de Bilderling. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa balanqaaday [...]